Video: Blọọgụ na Plain English | Martech Zone
Wednesday, December 19, 2007 Fraịde, Jenụwarị 6, 2017 Douglas Karr
Nnukwu vidiyo ọzọ si Nkịtị Ndị Nkịtị achọtara site na blọgụ Ade:
Criticismfọdụ nkatọ na-ewuli elu, n'agbanyeghị though vidiyo a tụfuru ụgbọ mmiri ahụ na teknụzụ n'azụ ịde blọgụ - ihe dị ka pings, trackbacks na njikarịcha njin ọchụchọ.
De blọgụ bụ High Octane Fuel maka Search Engine
Ihe vidiyo ahụ anaghị ekwu maka ya bụ ike ịde blọgụ n'ịgbalite isiokwu na nsonaazụ njin ọchụchọ. Ka ndị mmadụ na-ede banyere blog gị, ka ị na-egekwu gị ntị. Ka ị na - egekwu ndị na - ege ntị, ọ ka mma ka igwe nchọ gị jiri ogo gị. Nsonaazụ njin ọchụchọ gị kachasị mma, ka ị na-egekwu ndị na-ege gị ntị site na ọchụchọ.
Google choro itinye mbu, njiko di nma na mbu mgbe ha na-ede Keywords na ọdịnaya. Mgbe inwere blogosphere dum na-ede banyere gị - ọ na - eme ka ọdịnaya gị ruo n'ihu ahịrị. N'otu echiche, ịde blọgụ bụ mmanụ maka inye igwe nyocha.
Gịnị kpatara Blog? Gịnị ma ọ bụghị a Social Network?
Fọdụ ndị folks na-agbagha atụmatụ dị iche iche wee na-eche, sị, “Gịnị ma ị wulite netwọkụ mmekọrịta niile, ka emezie? Ọ bụrụ na ịde blọgụ dị mma maka nsonaazụ Nchọgharị - mgbe ahụ Social Networks ga-abụrịrị ịtụnanya! ”
Rịba ama otu echiche dị n'etiti blog, ndị na-ede blọgụ nwere uche, na ndị na-agụ ha (n'akụkụ aka ekpe nke eserese). Nke a bụ ube dị mkpa nke na-achọ ebe nwụrụ anwụ na isiokwu onye nyocha na-achọ. Netwọk mmekọrịta na-enwe echiche - na ụfọdụ ọbụna nwere ịde blọgụ n'ime (nke na-arụ ọrụ dịka blog nkịtị), mana maka ọtụtụ akụkụ Social Networks dị maka ịchọta dị ka ndị mmadụ, ọ bụghị ilekwasị anya n'otu echiche.
Netwọk mmekọrịta dị egwu - abụ m nke ọtụtụ. Mana ha enweghi uche nke isiokwu na isiokwu okwu nke blọọgụ nwere ike inwe maka ogo ogo engine engine. Blọọgụ bụ ọsọ ọsọ iji nweta echiche gị ma ọ bụ isiokwu gị. Netwọk mmekọrịta dị mma iji zute ma chọta ndị dịka gị.
Tags: blogblọọgụ na larịị bekeeVidio Ahịagini bu blog
Dee 19, 2007 na 9: 18 AM
@Douglas “folfọdụ ndị folks na-agbagha atụmatụ dị iche iche ma na-eche, gịnị kpatara na ị gaghị ewu netwọkụ mmekọrịta niile, mgbe ahụ? Ọ bụrụ na ịde blọgụ dị mma maka nsonaazụ Nchọgharị - mgbe ahụ Social Networks ga-abụrịrị ịtụnanya! ”
Anaghị m agbaso echiche ahụ ma ọlị. Ekwenyere m na ebumnuche gị na blọọgụ na netwọkụ mmekọrịta na-enwe atụmatụ dị iche iche bara uru yana netwọkụ mmekọrịta anaghị adị mma maka isiokwu SEO (n'agbanyeghị na ha nwere ike ịdị mma maka ihe ọzọ dị ka amabeghị), mana esoghị m etu ị chere ndị mmadụ si ese ahịrị dị n'etiti abụọ. Enwetụbeghị m onye ọ bụla kwuru ụdị ihe a that
Dee 19, 2007 na 9: 47 AM
Mgbe anyị na-agwa ụfọdụ ndị ahịa gbasara uru nke ịde blọgụ, ụfọdụ ụlọ ọrụ (ọ bụghị ọtụtụ) ụlọ ọrụ na-alaghachi na ha ga-achọ iwulite netwọkụ mmekọrịta. Ebe ụfọdụ netwọkụ mmekọrịta na-etinye ịde blọgụ, ha chere na nke a bụ n'ezie ọkwa dị elu.
Atụmatụ dị n’azụ nke ọ bụla dị iche, yana ndị na-ege ntị na ihe kpatara ha ji nọrọ ebe ahụ.
N'okpuru ala bụ na ụlọ ọrụ ka na-enwe mgbagwoju anya banyere teknụzụ ndị a ma anaghị aghọta esemokwu dị iche iche. Enwere m olile anya na agbataghị m ha ọzọ!
Dee 19, 2007 na 10: 02 AM
Ah, ahuru m ebe I si bia ugbua. Na-ekwu maka olile anya na ozuzu ndị neophyte na ndị ahịaNụrụ 'nsogbu ọhụrụ a nke akpọrọ "net-net" ma chọọ ị nweta m otu ihe ọ bụla' emere ka m nụ na ị nwere ike ịkụ ya-ọgaranya ebe ahụ. Kwuru ya na TV”Ọ bụghị banyere anyị ndị na-a attentiona ntị n'ezie!
(Ndo ma ọ bụrụ na m gafere ntakịrị ebe ahụ na njirimara… 🙂
(PS Olee banyere ịgbakwunye ikwu okwu nyochaa ihe mgbakwunye na ebe a ol'blog? Anụrụ m na-agwa ụfọdụ blogger zoro aka na ndepụta nke Top 30 plugins ebe. Aga m nzọ na ị nwere ike ịchọta otu na ndepụta ahụ… '-)
Dee 19, 2007 na 10: 22 AM
Nke a bụ otu ụzọ m ga - esi amata ọdịiche dị n'etiti ịde blọgụ azụmahịa maka Search vs. a Social Network for Business.
Maka ọtụtụ ndị mmadụ achọghị ịdenye aha na azụmaahịa azụmaahịa ha ma ha achọghị isonye na netwọkụ mmekọrịta gị. Ztù na-eche na a "ewu ya na ha ga-abịa" atụmatụ kwesịrị nnọọ melite otu ìgwè na Facebook, ị ga-enwe a ukwuu elu Ohere nke ọma karịa na-agbalị ime ka "Gị" ihe a "ebe" na ndị mmadụ ga-alaghachi.
Mgbe ị na-eche echiche maka ịde blọgụ, ị ga - eche n'eziokwu na ndị mmadụ ga - abịa naanị otu ugboro.
Nke a bụ uru kachasị elu nke ịde blọgụ ụlọ ọrụ
Dec 19, 2007 na 12:27 PM
Nke ahụ bụ 'peeji ọ bụla bụ ọdịda peeji' echiche m kwenyere na 100%. Agbanyeghị, na-enweghị onye na-edegharị ya, ị naghị achọpụta mkpuchi gị, ị ga-ekwe ka ndị ọzọ nwee ike ịgafe gị ngwa ngwa - na-agbanyeghị gị nsonaazụ. Oge na ikike bụ ihe dị mkpa na-enye ike ịnọ.